သတ်တမမွောကျ ကောငျးကငျဘုံနဲ့ ခြဲလျဆီး 7-0 နော့ဝဈချြပှဲအပွီး ပွောစရာ7ခကျြ – Sports A2Z
သတ်တမမွောကျ ကောငျးကငျဘုံနဲ့ ခြဲလျဆီး 7-0 နော့ဝဈချြပှဲအပွီး ပွောစရာ7ခကျြ
ခြဲလျဆီးရဲ့ Seventh Heaven
ခြဲလျဆီးအသငျးအနနေဲ့ ဒီလိုမြိုး ပွိုငျဘကျအသငျးကို ၆ ဂိုးနဲ့အထကျ သှငျးခဲ့တာက ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ၁၈ ကွိမျမွောကျဖွဈပွီး သူတို့ရဲ့ တိုကျစဈအပွောငျးအလဲနဲ့အတူ ခုနဈဂိုးသှငျးခဲ့တာက မီဒီယာတှရေဲ့ ရေးသားနကြေ စကားအလှဖွဈတဲ့ Seventh Heaven ဆိုတဲ့ သတ်တမ ကောငျးကငျဘုံကို ရောကျသှားစခေဲ့တာပါ။ မဆေနျမောငျ့ရဲ့ ဟကျထရဈ၊ အင်ျဂလိပျကစားသမားတှပေဲ သှငျးယူနိုငျခဲ့တဲ့ ဂိုးတှနေဲ့ နော့ဝဈချြကို နာလနျမထူနိုငျအောငျလုပျခဲ့ပွီး အဓိက တိုကျစဈမှူးတှေ ဒဏျရာရနတေော့မှပဲ အသငျးရဲ့ ဂိုးသှငျးနှုနျးကလညျး အံ့ဩလောကျအောငျ ထူးခွားကောငျးမှနျနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုမြိုး စကားကို ၂၀၀၄-၀၅ ရာသီက အာယနျ ရော့ဘငျက ပွောဖူးပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာလညျး ခြဲလျဆီးတို့အနနေဲ့ ဒီလိုပဲ ပွောရလောကျအောငျ ကှငျးလယျလူကနေ တိုကျစဈမှူးပွောငျးကစားနတေဲ့ ဟာဗတျဇျကို အထောငျထားပွီး ပှဲထှကျလာခြိနျမှာ သူကတောငျ ဂိုးသှငျးနိုငျတာမဟုတျဘဲ ကနျြတဲ့ တိုကျစဈနဲ့ ခံစဈက တောငျပံကစားသမားတှကေ အငျအားနညျးတဲ့ အဆငျ့ ၂၀ က ပွိုငျဘကျ နော့ဝဈချြကို ၆ ဂိုးတိတိ အားပေးသှားခဲ့တာပါ။
ကှငျးလယျတိုကျစဈကနေ ညာတောငျပံပွောငျးကစားတဲ့ မဆေနျမောငျ့က ဟကျထရဈ၊ ဘယျတောငျပံသမား ဟဒျဆနျ-အိုဒှိုငျး၊ ညာနောကျခံလူ ရီးဈဂြိမျးဈ၊ ဘယျနောကျခံလူ ခြေးလျဝဲလျတို့က တဈဂိုးစီ သှငျးခဲ့ကွပွီး လူကာကူးနဲ့ တီမို ဗာနာတို့နဲ့တောငျ ဒီလောကျ သှငျးနိုငျပါ့မလား မသခြောခြိနျမှာ ဒီနေ့ ပှဲထှကျကစားသမားတှကေတော့ စတမျးဖို့ဒျဘရဈချြမှာ ထိနျးမနိုငျသိမျးမရနဲ့ ရှပှေဲ့တှကေ မရတဲ့ ဂိုးတှကေိုပါ အစားသှငျးပေးသှားတာလားလို့ မေးခငျြစရာဖွဈခဲ့ပါတယျ။
တူဟယျလျ ယုံလို့ရတဲ့ အဆုံးသတျသမား
ဦးစားပေးတိုကျစဈမှူးနှဈယောကျ မပါဝငျခြိနျမှာ ညာတောငျပံနဲ့ ကှငျးလယျမှာ အလဉျြးသငျ့သလို ကစားပွီး ၃ ဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့တဲ့ မဆေနျမောငျ့ တဈယောကျအတှကျတော့ နညျးပွ သောမတျဈ တူဟယျလျအတှကျတော့ ယုံကွညျကိုးစားနိုငျဖို့ ရှိနခေဲ့ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ပှဲတှကေ လူထကျ စိတျပငျပနျးနလေို့ အနားပေးခဲ့တာဆိုတဲ့ အင်ျဂလနျကှငျးလယျလူဟာ ဒီနမှေ့ာ နညျးပွစကားက သူ့ကို စိတျဓာတျစဈဆငျရေးလုပျတာပဲလို့ ဟကျထရဈ ရယူအပွီးမှာ တုံ့ပွနျလိုကျသလို ၂၂ နှဈသားအနနေဲ့ ဒီနမှေ့ာ ဂိုးကနျခကျြ ၅ ကွိမျမှာ ၄ ကွိမျဂိုးပေါကျတညျ့ပွီး ၃ ဂိုးရရှိခဲ့တဲ့ မှတျတမျးက လာမယျ့ ပှဲတှေ အတှကျလညျး အဓိကနရောက ကစားနိုငျဖို့ ဖွဈလာပွီလို့ ဆိုရတော့မှာပါ။
နှဈပှဲဆကျတိုကျ အခှငျ့အရေးကို ဆုပျကိုငျခဲ့တဲ့ CHO
CHO လို့ အတိုကောကျချေါတဲ့ ကယျလမျ ဟဒျဆနျ-အိုဒှိုငျးကတော့ သူ့ရဲ့ အကောငျးဆုံးနရောကို နညျးပွရဲ့ အသိအမှတျပွုမှုနဲ့အတူ နှဈပှဲဆကျ ဂိုးသှငျးယူပွနိုငျခဲ့ပွီး မာလျမိုနဲ့ပှဲမှာ လူစားဝငျပွီး ခွစှေမျးပွသလိုပဲ ဒီနမှေ့ာလညျး အသကျ ၂၀ အရှယျ တောငျပံကစားသမားအနနေဲ့ ကြှမျးကငျြမှု မွငျ့မွငျ့မားမားပွသပွီး တဈဂိုးသှငျးခဲ့သလို သူ့ရဲ့ ဖွတျတငျဘော တဈကွိမျကနေ နော့ဝဈချြနောကျခံလူ မကျဈ အာရှနျဈ ကိုယျ့ဂိုးကိုယျသှငျးအောငျ တတျနိုငျခဲ့တာပါ။
တူဟယျလျရဲ့ တောငျပံတှကေို အခွအေနအေရ အားကိုးကိုကိုးရတော့မယျ့ အခြိနျမှာ ဟဒျဆနျ-အိုဒှိုငျးရဲ့ အခြိနျကိုကျတောကျပမှုဟာ လူကာကူးနဲ့ တီမို ဗာနာတို့ရဲ့ ကှကျလပျအတှကျ အကောငျးဆုံးဖွရှေငျးမှုတဈရပျအဖွဈ မဆေနျမောငျနဲ့အတူ ပျေါထှကျလာခဲ့တာလညျးဖွဈပွီး လကျရှိ ခွစှေမျးအရတော့ ပုလှရေိုးလေး ဇီးယကျရျှထကျလညျး ခေါငျးတဈလုံးသာလှနျမှုနဲ့အတူ ပှဲထှကျနရောအတှကျ ရှကေ့ ဦးစားပေးခံရဖို့ ရှိနခေဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။
ကော့ဘျဟမျးရဲ့ ဂုဏျယူစရာ နရေ့ကျ
ခြဲလျဆီးအသငျးပိုငျရှငျ ရိုမနျ အဘေရာမိုဗဈချြအနနေဲ့ အသငျးကို ပွောငျးရှကွေ့ေးမွငျ့မားတဲ့ ကစားသမားကောငျးတှကေို ငှသေုံးချေါယူအပွီးမှာ လူငယျစီမံကိနျးကိုလညျး အခွပွေုဖို့ ပျေါလစီ ခမြှတျပေးခဲ့ပွီး ကော့ဘျဟမျးအကယျဒမီကို အဆငျ့မွငျ့အောငျ ပြိုးထောငျခဲ့တာက ဒီနမှေ့ာ အသီးအပှငျ့တှေ ဝဆောခဲ့တာပါ။ ရီးဈဂြိမျးဈ၊ ဟဒျဆနျ-အိုဒှိုငျးနဲ့ မဆေနျမောငျ့တို့က နော့ဝဈချြအပျေါ နိုငျပှဲအတှကျ ခွစှေမျးပွ ဂိုးသှငျးခဲ့ကွလို့ လူငယျအကယျဒမီက တာဝနျရှိသူတှကေို ပြျောရှငျစနေတေုနျးမှာပဲ ဒီပှဲအပွီးမှာ ကနျတဲ့ ဆောကျသမျတနျနဲ့ ဘနျလတေို့ရဲ့ပှဲမှာ ခြဲလျဆီးအသငျးက ပွနျလညျချေါယူခှငျ့နဲ့အတူ ရောငျးခလြိုကျတဲ့ ၁၈ နှဈသား နောကျခံလူ တီနို လီဗရာမနျတိုကလညျး တဈဂိုးသှငျးယူပွခဲ့သေးတာဖွဈပါတယျ။
ဂြျောဂငျြညိုနဲ့ ကိုဗာခဈြတို့ရဲ့ ဖနျတီးမှုစှမျးရညျ
ကှငျးလယျမှာ ကှနျတကေို အနားပေးထားခဲ့ပွီး ပှဲထှကျလာခဲ့တဲ့ ခြဲလျဆီးရဲ့ ဒီနအေ့တှဲအဖကျက အသငျးအတှကျ သုံးဂိုးဖနျတီးပေးနိုငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဂြျောဂငျြညိုအနနေဲ့ ၆၄ မိနဈ ကစားခဲ့ခြိနျမှာ တိုကျစဈဇုနျအတှကျ ဘောလုံးအကွိမျ ၂၀ ပေးပို့ခဲ့ပွီး ဖကျြထုတျမှုနဲ့ ဘောလုံးရယူမှုတှကေ ကှငျးလယျဗဟိုကို စိုးမိုးထားနိုငျခြိနျမှာ မဆေနျမောငျ့ရဲ့ အဖှငျ့ဂိုးအတှကျလညျး ဖနျတီးပေးပို့နိုငျခဲ့ပါတယျ။ တှဲဖကျကှငျးလယျလူ ကိုဗာခဈြကလညျး ကြောနံပါတျ ၈ နဲ့အတူ ဒီရာသီမှာ ခွစှေမျးပွနပွေီး သူ့ရဲ့ ဦးတညျခကျြကတော့ ကှငျးရဲ့ ဘယျခွမျးကို ဖွဈခဲ့သလို ဟဒျဆနျ-အိုဒှိုငျးနဲ့ ခြေးလျဝဲလျတို့ ဂိုးသှငျးယူနိုငျဖို့ နှဈကွိမျ ဖနျတီးပေးနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Chelsea have recorded their biggest ever win in the Premier League under Thomas Tuchel since being appointed manager in January 2021.
A seven-star show at Stamford Bridge. ⭐️ pic.twitter.com/qbiGXMlFCx
ခနျြပီယံဆုအတှကျ အမောကျထောငျပွတဲ့ ခြဲလျဆီး
တိုကျစဈမှူးနှဈယောကျ မရှိလို့ ခြဲလျဆီးတို့ကို အားနညျးသှားမယျလို့ ထငျတဲ့သူတှအေတှကျ ဒီပှဲက တကျတကျစငျအောငျ လှဲခဲ့သလို တဈသငျးလုံးက တိုကျစဈစှမျးရညျရှိသူတှအေားလုံး အခှငျ့အရေးအပျေါ မူတညျပွီး ရှတေ့ကျကစားခဲ့တဲ့ ပုံစံတှကေ အားရစရာဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ရီးဈဂြိမျးဈနဲ့ ခြေးလျဝဲလျတို့က တဈဂိုးစီ သှငျးယူပေးခဲ့သလို ရူဒီဂါကလညျး ပငျနယျတီရစမေယျ့ အနီးကပျကနျသှငျးမှုကို ပွုလုပျပေးနိုငျခဲ့လို့ ခနျြပီယံအသငျးတှရေဲ့ နရောစုံကနေ ဂိုးရှာဖှနေိုငျမှုကို မှတျကြောကျတငျခံသလိုဖွဈခဲ့တာပါ။ နညျးပွ တူဟယျလျအနနေဲ့ အသငျးကို အမှားအယှငျး ကွီးကွီးမားမား မလုပျဘဲ ကိုငျတှယျနိုငျခဲ့မယျဆိုရငျ ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကို စတမျးဖို့ဒျဘရဈချြဆီ ခိုနားအောငျ တတျနိုငျလိမျ့မယျလို့လညျး ခနျ့မှနျးခငျြစရာဖွဈခဲ့တာပါ။
ချဲလ်ဆီးရဲ့ Seventh Heaven
ချဲလ်ဆီးအသင်းအနေနဲ့ ဒီလိုမျိုး ပြိုင်ဘက်အသင်းကို ၆ ဂိုးနဲ့အထက် သွင်းခဲ့တာက ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ၁၈ ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ တိုက်စစ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတူ ခုနစ်ဂိုးသွင်းခဲ့တာက မီဒီယာတွေရဲ့ ရေးသားနေကျ စကားအလှဖြစ်တဲ့ Seventh Heaven ဆိုတဲ့ သတ္တမ ကောင်းကင်ဘုံကို ရောက်သွားစေခဲ့တာပါ။ မေဆန်မောင့်ရဲ့ ဟက်ထရစ်၊ အင်္ဂလိပ်ကစားသမားတွေပဲ သွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ဂိုးတွေနဲ့ နော့ဝစ်ခ်ျကို နာလန်မထူနိုင်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီး အဓိက တိုက်စစ်မှူးတွေ ဒဏ်ရာရနေတော့မှပဲ အသင်းရဲ့ ဂိုးသွင်းနှုန်းကလည်း အံ့ဩလောက်အောင် ထူးခြားကောင်းမွန်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး စကားကို ၂၀၀၄-၀၅ ရာသီက အာယန် ရော့ဘင်က ပြောဖူးပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း ချဲလ်ဆီးတို့အနေနဲ့ ဒီလိုပဲ ပြောရလောက်အောင် ကွင်းလယ်လူကနေ တိုက်စစ်မှူးပြောင်းကစားနေတဲ့ ဟာဗတ်ဇ်ကို အထောင်ထားပြီး ပွဲထွက်လာချိန်မှာ သူကတောင် ဂိုးသွင်းနိုင်တာမဟုတ်ဘဲ ကျန်တဲ့ တိုက်စစ်နဲ့ ခံစစ်က တောင်ပံကစားသမားတွေက အင်အားနည်းတဲ့ အဆင့် ၂၀ က ပြိုင်ဘက် နော့ဝစ်ခ်ျကို ၆ ဂိုးတိတိ အားပေးသွားခဲ့တာပါ။
ကွင်းလယ်တိုက်စစ်ကနေ ညာတောင်ပံပြောင်းကစားတဲ့ မေဆန်မောင့်က ဟက်ထရစ်၊ ဘယ်တောင်ပံသမား ဟဒ်ဆန်-အိုဒွိုင်း၊ ညာနောက်ခံလူ ရီးစ်ဂျိမ်းစ်၊ ဘယ်နောက်ခံလူ ချေးလ်ဝဲလ်တို့က တစ်ဂိုးစီ သွင်းခဲ့ကြပြီး လူကာကူးနဲ့ တီမို ဗာနာတို့နဲ့တောင် ဒီလောက် သွင်းနိုင်ပါ့မလား မသေချာချိန်မှာ ဒီနေ့ ပွဲထွက်ကစားသမားတွေကတော့ စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျမှာ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရနဲ့ ရှေ့ပွဲတွေက မရတဲ့ ဂိုးတွေကိုပါ အစားသွင်းပေးသွားတာလားလို့ မေးချင်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တူဟယ်လ် ယုံလို့ရတဲ့ အဆုံးသတ်သမား
ဦးစားပေးတိုက်စစ်မှူးနှစ်ယောက် မပါဝင်ချိန်မှာ ညာတောင်ပံနဲ့ ကွင်းလယ်မှာ အလျဉ်းသင့်သလို ကစားပြီး ၃ ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ မေဆန်မောင့် တစ်ယောက်အတွက်တော့ နည်းပြ သောမတ်စ် တူဟယ်လ်အတွက်တော့ ယုံကြည်ကိုးစားနိုင်ဖို့ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲတွေက လူထက် စိတ်ပင်ပန်းနေလို့ အနားပေးခဲ့တာဆိုတဲ့ အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်လူဟာ ဒီနေ့မှာ နည်းပြစကားက သူ့ကို စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးလုပ်တာပဲလို့ ဟက်ထရစ် ရယူအပြီးမှာ တုံ့ပြန်လိုက်သလို ၂၂ နှစ်သားအနေနဲ့ ဒီနေ့မှာ ဂိုးကန်ချက် ၅ ကြိမ်မှာ ၄ ကြိမ်ဂိုးပေါက်တည့်ပြီး ၃ ဂိုးရရှိခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းက လာမယ့် ပွဲတွေ အတွက်လည်း အဓိကနေရာက ကစားနိုင်ဖို့ ဖြစ်လာပြီလို့ ဆိုရတော့မှာပါ။
နှစ်ပွဲဆက်တိုက် အခွင့်အရေးကို ဆုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ CHO
CHO လို့ အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ ကယ်လမ် ဟဒ်ဆန်-အိုဒွိုင်းကတော့ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံးနေရာကို နည်းပြရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုနဲ့အတူ နှစ်ပွဲဆက် ဂိုးသွင်းယူပြနိုင်ခဲ့ပြီး မာလ်မိုနဲ့ပွဲမှာ လူစားဝင်ပြီး ခြေစွမ်းပြသလိုပဲ ဒီနေ့မှာလည်း အသက် ၂၀ အရွယ် တောင်ပံကစားသမားအနေနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု မြင့်မြင့်မားမားပြသပြီး တစ်ဂိုးသွင်းခဲ့သလို သူ့ရဲ့ ဖြတ်တင်ဘော တစ်ကြိမ်ကနေ နော့ဝစ်ခ်ျနောက်ခံလူ မက်စ် အာရွန်စ် ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်းအောင် တတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။
တူဟယ်လ်ရဲ့ တောင်ပံတွေကို အခြေအနေအရ အားကိုးကိုကိုးရတော့မယ့် အချိန်မှာ ဟဒ်ဆန်-အိုဒွိုင်းရဲ့ အချိန်ကိုက်တောက်ပမှုဟာ လူကာကူးနဲ့ တီမို ဗာနာတို့ရဲ့ ကွက်လပ်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းမှုတစ်ရပ်အဖြစ် မေဆန်မောင်နဲ့အတူ ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ခြေစွမ်းအရတော့ ပုလွေရိုးလေး ဇီးယက်ရ်ှထက်လည်း ခေါင်းတစ်လုံးသာလွန်မှုနဲ့အတူ ပွဲထွက်နေရာအတွက် ရှေ့က ဦးစားပေးခံရဖို့ ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကော့ဘ်ဟမ်းရဲ့ ဂုဏ်ယူစရာ နေ့ရက်
ချဲလ်ဆီးအသင်းပိုင်ရှင် ရိုမန် အေဘရာမိုဗစ်ခ်ျအနေနဲ့ အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ကြေးမြင့်မားတဲ့ ကစားသမားကောင်းတွေကို ငွေသုံးခေါ်ယူအပြီးမှာ လူငယ်စီမံကိန်းကိုလည်း အခြေပြုဖို့ ပေါ်လစီ ချမှတ်ပေးခဲ့ပြီး ကော့ဘ်ဟမ်းအကယ်ဒမီကို အဆင့်မြင့်အောင် ပျိုးထောင်ခဲ့တာက ဒီနေ့မှာ အသီးအပွင့်တွေ ဝေဆာခဲ့တာပါ။ ရီးစ်ဂျိမ်းစ်၊ ဟဒ်ဆန်-အိုဒွိုင်းနဲ့ မေဆန်မောင့်တို့က နော့ဝစ်ခ်ျအပေါ် နိုင်ပွဲအတွက် ခြေစွမ်းပြ ဂိုးသွင်းခဲ့ကြလို့ လူငယ်အကယ်ဒမီက တာဝန်ရှိသူတွေကို ပျော်ရွှင်စေနေတုန်းမှာပဲ ဒီပွဲအပြီးမှာ ကန်တဲ့ ဆောက်သမ်တန်နဲ့ ဘန်လေတို့ရဲ့ပွဲမှာ ချဲလ်ဆီးအသင်းက ပြန်လည်ခေါ်ယူခွင့်နဲ့အတူ ရောင်းချလိုက်တဲ့ ၁၈ နှစ်သား နောက်ခံလူ တီနို လီဗရာမန်တိုကလည်း တစ်ဂိုးသွင်းယူပြခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျော်ဂျင်ညိုနဲ့ ကိုဗာချစ်တို့ရဲ့ ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်
ကွင်းလယ်မှာ ကွန်တေကို အနားပေးထားခဲ့ပြီး ပွဲထွက်လာခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီးရဲ့ ဒီနေ့အတွဲအဖက်က အသင်းအတွက် သုံးဂိုးဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျော်ဂျင်ညိုအနေနဲ့ ၆၄ မိနစ် ကစားခဲ့ချိန်မှာ တိုက်စစ်ဇုန်အတွက် ဘောလုံးအကြိမ် ၂၀ ပေးပို့ခဲ့ပြီး ဖျက်ထုတ်မှုနဲ့ ဘောလုံးရယူမှုတွေက ကွင်းလယ်ဗဟိုကို စိုးမိုးထားနိုင်ချိန်မှာ မေဆန်မောင့်ရဲ့ အဖွင့်ဂိုးအတွက်လည်း ဖန်တီးပေးပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တွဲဖက်ကွင်းလယ်လူ ကိုဗာချစ်ကလည်း ကျောနံပါတ် ၈ နဲ့အတူ ဒီရာသီမှာ ခြေစွမ်းပြနေပြီး သူ့ရဲ့ ဦးတည်ချက်ကတော့ ကွင်းရဲ့ ဘယ်ခြမ်းကို ဖြစ်ခဲ့သလို ဟဒ်ဆန်-အိုဒွိုင်းနဲ့ ချေးလ်ဝဲလ်တို့ ဂိုးသွင်းယူနိုင်ဖို့ နှစ်ကြိမ် ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ချန်ပီယံဆုအတွက် အမောက်ထောင်ပြတဲ့ ချဲလ်ဆီး
တိုက်စစ်မှူးနှစ်ယောက် မရှိလို့ ချဲလ်ဆီးတို့ကို အားနည်းသွားမယ်လို့ ထင်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီပွဲက တက်တက်စင်အောင် လွဲခဲ့သလို တစ်သင်းလုံးက တိုက်စစ်စွမ်းရည်ရှိသူတွေအားလုံး အခွင့်အရေးအပေါ် မူတည်ပြီး ရှေ့တက်ကစားခဲ့တဲ့ ပုံစံတွေက အားရစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရီးစ်ဂျိမ်းစ်နဲ့ ချေးလ်ဝဲလ်တို့က တစ်ဂိုးစီ သွင်းယူပေးခဲ့သလို ရူဒီဂါကလည်း ပင်နယ်တီရစေမယ့် အနီးကပ်ကန်သွင်းမှုကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့ ချန်ပီယံအသင်းတွေရဲ့ နေရာစုံကနေ ဂိုးရှာဖွေနိုင်မှုကို မှတ်ကျောက်တင်ခံသလိုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ နည်းပြ တူဟယ်လ်အနေနဲ့ အသင်းကို အမှားအယွင်း ကြီးကြီးမားမား မလုပ်ဘဲ ကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျဆီ ခိုနားအောင် တတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းချင်စရာဖြစ်ခဲ့တာပါ။
မိနဈ ၃၀ နဲ့ ဘဝခါးတဲ့ ဘရိုကျတနျ 1-4 မနျစီးတီးပှဲအပွီး မှတျမှတျရရ ပွောစရာ7ခကျြ